Sidee si ay u gudbiyaan Music ka classic iPod in Computer r
> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka classic iPod in Computer
Waa maxay sababta aad rabtid in aad ka classic music iPod wareejiyo si computer?
Iyada oo lagu kaydiyo meel ugu weyn ka mid ah dhamaan noocyada iPod iyo tayada midab u fiican, classic iPod waa arrin caan ah oo ka mid ah kuwii ku caashaqi jiray music. Bixiso in aad ku badbaadi songs wayn ee aad classic iPod iyo haatan doonayaa si ay u gudbiyaan si aad u computer-brand cusub ee gurmad iyo Raaxo. Ama, waxaad la kulmi shil computer ama drive failure adag, si aad rabto in aad nuqul ka music classic iPod in computer. Markaas, waxa habka aad u qaadan doonaa si hawsha ay u dhammaystiraan?
Xaaladaha sidan oo kale ahi, haddii aan idiin yimid la fikrad fiican in aad nuqulka music ka iPod classic in computer, ha ka welwelin. Halkan hab fiican oo aad u. Waxaad isku dayi kartaa barnaamij waxtar leh - TunesGo Wondershare . Iyada oo ay caawimaad, waxaad nuqul ka kartaa iPod classic music si aad u computer in 2 tallaabooyinka. Ka sokow wareejinta music in computer, si aad u Lugood iyo sidoo wareejin karaan music on classic iPod dib.
Sida loo ka classic music iPod wareejiyo si computer
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka faahfaahsan oo ay u guuraan iPod music classic in PC. Download version maxkamada ee xorta ah ee codsigan.
Tallaabada 1. Connect iPod classic in PC ka dib markii socda barnaamijkan
Si aan ku bilaabo, rakibi ka dibna codsigan aad kombuutarka ay maamulaan. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad classic iPod aad PC. Ka dib markii arjigan ogaadaa aad classic iPod, waxaad ka arki kartaa dhammaan xogta aad iPod classic ka column bidix ee kooxda.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad soo dajiyo Lugood aad kombuutarka hor inta aadan isticmaalin barnaamijkan inay sii qulquli heeso ka classic iPod in computer.
Tallaabada 2. Transfer iPod classic music in computer
Guji "Media", tab ee column bidix ee kooxda. Ka dib markii uu furmo suuqa warbaahinta u muuqataa dhanka midig, guji "Music". Markaas, heesaha oo dhan aad halkan ku qoran. Dooro heeso aad rabto in aad u dhoofiyaan. Markaas, guji "Dhoofinta in". Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala file browser ah. Dooro gal ah si loo badbaadiyo songs dhoofiyo. Ka dib markii in, codsigan bilaabo dhaqaaqin heeso. Ha illoobin in aad classic iPod ku xiran waqtiga oo dhan.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada dhamaan noocyada classic iPod, iPod classic 3, iPod classic 2 iyo classic iPod.
Taasi waxa ay samaysay! Waxaad dhoofiyo music ka classic iPod si aad u computer. Waa hagaag, si ay u gudbiyaan music aad coomputer ka classic iPod, waxa kale oo aad si toos ah u riixi kartaa "Si gal", button ee khadka hoose uu furmo suuqa hoose.
Addionally, haddii aad leedahay badbaadin playlists warious aad classic iPod, aad dib ay awoodaan in ay u guurto si aad u computer sidoo kale. khaanadda bidix, guji "playlist". Dhammaan playlists noqon doono guddiga saxda ah. Ka dib markii doorashada playlists aad jeceshahay, waa in aad ku dhufo "Dhoofinta in". marka liiska jiido hoos u muuqataa, waxaa idinku waajib ah in ay doortaan "Dhoofinta in My computer". Markaas suuqa kala file browser soo booda. Calan meel on your computer si loo badbaadiyo playlists dhoofiyo.
Watch Video Tutorial si ay u gudbiyaan Music ka classic iPod in Computer
Sida loo Undelete iPod xiriiri Videos